အမေစု မကြာခင် facebook သုံးမည်ဟု ကြားသိရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အမေစု မကြာခင် facebook သုံးမည်ဟု ကြားသိရ
အမေစု မကြာခင် facebook သုံးမည်ဟု ကြားသိရ
Posted by အာဂ on Nov 15, 2010 in Myanma News, News | 18 comments
အေမစု မၾကာခင္ facebook သုံးမည္ဟု ၾကားသိရ
အမေစုက မကြာခင် facebook သုံးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေရာလေးမှာ ဝမ်းနဲ့ လွယ်မမွေးပေမယ့် ပြည်ထောင်စုက မွေးပေးလိုက်တဲ့ သူ့သားသမီးတွ ရဲ့ ဆုတောင်းပုံလေးတွေ ၊ ချစ်ခင်လေးစားစွာနဲ့ အမေလို့ ခေါ်နေကြပုံတွေ ၊ ကိုယ့်မိခင်ရင်း လို သဘေားထားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး မိခင်အတွက် စိတ်ပူနေကြပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ဝမ်းသာကြည်နူးလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ ။
လတ်တလော ရရှိတဲ့ သတင်းအရ ဒီအကောင့်လေးကို အမေစတင် အသုံးပြုမယ်လို့သိရပါတယ် ။
ကျွန်တော်ကတော့ add ထားလိုက်ပါပြီ ။ အမေ့ရင်သွေးငယ်လေး တွေ အနေဲ့ သွားရောက်လေ့လာ ဖတ်ရှုနိူင်ပါပြီ ခင်ဗျာ ။
အမေဆီက တုန့်ပြန်သံလေး ကို ကြားချင်လို့ ဒီနေရာလေးကို လာရောက်
လည်ပတ်ဖို့ အမေ့ကိုလည်း ဖိတ်ထားခဲ့ပါတယ်
အမေစုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကို ဒီနေရာလေးမှာ ပြောင်းပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ကူညီဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျန်းမာခ…ျမ်းသာပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
တရားပွဲ ပထမပိုင်း MP3 လေးပါခင်ဗျာ ။ တော်တော်လေးကိုကြည်လင်ပြတ်သားပါတယ်။
အမေစု တရားပွဲ အပိုင်း နှစ်ပါ MP3 လေးပါ ခင်ဗျာ ။ မြန်မာပြည် အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးအောက်က လွတ်မြောက်၍ ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံ တည်ဆောက် နိူင်အောင် ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြပါစို့။
Burma Thwe Facebook မှ……
ဦးလေး အာဂ အမှန်ပါနော်.. လိမ်ညာ လှည့်ပတ် ကွေ့ကောက်တဲ့ လူတွေ အယောင်ဆောင်တာ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်.. အမှန်ဖြစ်ပါစေ။
ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားဆိုတာ အချိန်ကာလ တစ်ခုက အဖြေပေးသွားမယ်လို့ထင် ပါတယ်။
အမှန်ဆိုကောင်းတယ်…….။အမေစုကလည်းပြည်သူတွေကိုချစ်တယ်တဲ့ ….အမေစုကိုလည်းချစ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါ ။.အမေစုကျန်းမာပါစေ….။လုပ်သမျှအရာအားလုံးလည်း ချောချောမောမောနဲ့ …အနှောက်အယှက်မရှိ …….အောင်မြင်နိုင်ပါစေ………
ကျွန်တော်တော့ add မလုပ်သေးဘူး။ ပြောရရင် မယုံလို့။ သေချာရင် add ဖို့ ဘာမှ အပမ်းမကြီးပါဘူး။ ဒေါ်စု က သေချာပြောမှ add လုပ်မယ်။ သေချာတာ အခုအချိန်မှာ ဒေါ်စု facebook ကို ဝင်ဖို့.. အချိန်မရှိသေးဘူး။ သူ့မှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။
တခြားသူတွေကိုလည်း လျှောက် add မလုပ်စေချင်ဘူး။ ဒါမျိုးတွေ အများကြီး ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သိပြီးသား။
Thanks share to MP3 fille& site Info.
သေ ချာ တယ် နော် ဦး လေး ရဲ. တ ကယ် သုးံ ဖြစ် ရင် တော. ကျေး ဇူး ဗျာ …
ပြည်သူတွေကလဲ အမေစုကို ထာဝရချစ်ခင်လေးစားလျှက်ပါ။
ယုံကြည်ဖို့ရာစောသေးပါတယ်။ ဒေါ်စုက ကြေငြာမှ အပ်မယ်ဗျို့။
ယုံကြည်မကြည်တော့မသိ.. အပ်လို့မရတော့ပါ..။ လူများလို့တဲ့..။
နောက်ဆို အဲဒီလိုလုပ်ပြီး …အဆီကျ ပိန်ဆေးရောင်းမှနဲ့တူတယ်..။
ဒီကိစ္စကအတော်ခရီးရောက်တာကလား…။ သမ္မတ Obama တောင်အိမ်ဖြူမရောက်ခင်အထိရှိတယ်ဆိုလဲ။
တံခါးတွေဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ ပန်းစည်းလေးတစ်စည်း ပေးချင်ရင်လည်းလွယ်တယ်။
အင်း ……ခဲ နဲ ့ထုချင်ရင်လည်းလွယ်တယ်။ သတိရှိမှဖြစ်မှာပါ။
အမေစုက တရားဝင်ပြောမှ add တာကောင်းတယ် ။
ဝင်တော့ကြည့်ချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ဒါဘယ်သူလုပ်ထားတာလည်းသေချာမသိသေးဘူးဗျာ.. အမေစုကို ထိခိုက်မှာစိုးတယ် .. ဒလျိုကောင်တွေက ပေါပေါနဲ့..ဗျာ..
ကျွန်တော်ကတော့ စေတနာနဲ့ တင်တာပါ။ အတ်ပါလို့လည်း မည်သူကိုမှ မတိုက် တွန်းပါဘူး ၊ နောက် ကြော်ငြာလုပ်နေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
သေချာတာကတော့ အမေစုကိုထိ ခိုက်မယ် လုပ်ရပ်မျိုး လည်း မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒီ သတင်းကို စပေးသူကိုလည်း လင့်ပေးထားပါတယ်။ သူရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကိုလည်း လေ့လာပြီးမှ ပြောစေချင်ပါတယ်။ သူကလည်း တကယ် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အာမခံပါတယ်။ ဘယ်သူ add လုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် မိမိ ဆန္ဒ သဘော အရသာဖြစ်လို့ ဘာမှလည်း ပြောချင်ပါဘူး။။ ဒီသတင်း ကိုပေးသူက
Burma Thwe Facebook ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရပ်တည်မှုကို လေ့လာကြည့်ပြီး သူကိုမေးကြည့်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါမယ်။ (နောက် ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးက ကျွန်တော်ကို နအဖ ဘက်ကလိုလို ဒလန် လိုလို သူသျှိုလိုလို အမြင်ခံရမှာ အမုန်းဆုံးနဲ့ အကြောက်ဆုံးပါပဲ..။ အခုလိုကာလ မှာ ဒါတွေက ဂရုစိုက်နေရမယ့်အချိန် ဆိုပေမဲ့ တကယ်ဒီမိုဘက်တော်သားတွေကိုတော့ အရောင်တွေ မစိုးစေချင်ပါဘူး။ အချင်းချင်းလည်း သွေးမကွဲစေချင်ပါဘူး။။။)
ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်က ဘယ်သူထလုပ်လုပ် လုပ်လို့ရပါတယ်.။ ကျုပ်ဆို အကောင့်၄-၅ခုလောက်တောင်ရှိသေး..။
လူတွေ ကြိုက်သလောက် သွား Add လဲ ပြသနာမရှိပါဘူး..။ သူများလုပ်ထားပြီး ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေလည်း ပြန်ဖြုတ်ယုံပါပဲ..။ ဘွာတေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တကမ္ဘာလုံးကမီဒီယာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်စကားပြောနေတာ..။ သူ့ကိုယ်ပိုင် အကောင့်ဆို ကြေငြာပြောလိုက်မယ်လို့သေချာပါတယ်..။
ဒီလိုပါပဲ.. တချို ့ကစေတနာနဲ့ကြိုလုပ်ပေးထားကြတာ…။ ကိုယ်လုပ်ပေးထားတာလေး ..ဒေါ်စုသုံးစေချင်တာပေါ့..။
ဆို လူတောင် 277,479 ရှိနေပြီ။ ယူကေ- ကန်ပိန်းက လုပ်ပေးထားတာလို့ပြောတာပဲ.။
သူများလုပ်ပေးထားတာ ပြန်လွှဲယူကြေးဆို ဒေါ်စုက အဲဒါတောင်းယူမှာပေါ့..။
အဲဒါ ..ဘာကဘယ်လို ဒလျှိုတွေ။ ဒလံတွေ ဖြစ်ကုန်ကြသလည်းခင်ဗျား..။
( ပို့စ်တင်ပေးသူကိုတော့ .. သတင်းသိရတာမို ့… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။)
လူများလို့ အက်လို့ မရပါဆိုလျှင်တော့ .. လောလောဆယ် သူ အကောင့်ကို ဝင်မကြည့်ဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်နော် … ။ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လာတော့မှာပါလေ … ။ သူ့ဖေ့စ်ဘွခ်ကို … အနှောက်ယှက်အဖျက်တွေလည်း ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့နော် … security ပိုင်းကိုတော့ … သေချာ တွေးထားမှဖြစ်မယ် ….
သတင်းပေးတဲ့ ကိုအာဂကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးပါလို့